Boomerang Gtk, theme yakanakisa yeGnome uye Xfce | Kubva kuLinux
Heino chaiyo yakasarudzika theme yeDesktop yedu Gnome o Xfce, iyo inowanikwa mumhando mbiri, imwe ine mavara akareruka uyezve, imwe yacho ine mavara erima.
Musoro unoenderana ne gtk3, asi, kwavari tinofanirwa kunge takaiswa Unico, iyo gtk-injini iyo inouya nekutadza mu Ubuntu. For gtk 2 isu tinongofanirwa kunge takaisa pixbuf y murine:
Tinogona kurodhaunira kubva Iyi link.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Chitarisiko / Kuita munhu » Boomerang Gtk, theme yakanakisa yeGnome uye Xfce
Zvinotaridza kuti MGSE haigamuchire. Zvakashata, zvinotaridzika kuva zvakanaka kwazvo uye zvakanaka. Kunyangwe ini ndichida Mint-Z uye ndisina zvichemo pamusoro pazvo, zvinogara zvakanaka kuramba uchichinja uye kuyedza.
Ernest kana akazvigamuchira, kana iwe waita shanduko kubva kumamiriro epamberi, anozobuda obva apinda mukati uye ndizvozvo.
Musoro wakanaka kwazvo.
Kunyangwe iri kunze kwenyaya yandisati ndaona mumapeji eSpanish chero chinhu nezve nhau dze micro $ kazhinji kuchinjira kune XMPP protocol yeMutumwa. Izvo zvinotifadza isu tinoshandisa Linux asi tine Hotmail maakaunzi.
Ndine urombo nemusoro wenyaya.
avo vedu vanoshandisa Linux asi vane Hotmail account.
Hongu Ushingi, kune vazhinji vashandisi vanoshandisa Linux uye zvakare Hotmail.
Nekuti vasati vashandisa Windows, kana nekuda kwekuti shamwari dzavo zhinji vanoshandisa Hotmail, uye vanoda MSN kana WLM account kuti vataure neshamwari idzi.
Ndichiri kushandisa hotmail ... Asi kamwe chete mireniyumu neMSN ... xD
Nenzira, Elav anotove nebvudzi here? xD
Iko kunogara kune sarudzo yekuchinja vatengi
Ini handishandisi hotmail, ndinoshandisa live LOL asi ichokwadi, kunyangwe tichigona kushandura vatengi (ndine yahoo, skype uye gmail zvakaparadzana) havazi vese vatinoshamwaridzana navo vanovashandisa, uye ndoda vangazoda kuchinjira vatengi vedu: / kunyangwe facebook uye twitter iri kutora chikamu chakakura chemunda kubva kumeseji vatengi, ivo vachiri kubatsira kune avo vasina kana vasingadi maakaundi mune aya masocial network ~
Ushingi, hauchatoshandisa Linux zvekare, saka usazununguke. hehe
Ndinovimba izvi kushandisa Hasefroch hakugare kwenguva refu.
Ndinoifarira, pachave neiyo KDE?
inotaridzika kuva yakanaka kwazvo, sezvandinoita kuiisa iwo thema mu xubuntu
Pindura kuna azavenom
Ese ma gtk madingindira (mune ese Gnome uye Xfce) anofanirwa kunge ari mu ".themes" dhairekitori reimba yako dhairekitori.
Panyaya yemusoro wenyaya uyu, kana uchinge wautora pasi, unofanira kutora (kana "unzip") zvirimo mu .zip. Kune mafaera ezvimwe zviviri zvemusoro wenyaya wakamanikidzwa (mu tar.gz),
Tarisa kana iwo theme kana hwindo maneja wechigadzirwa chako chinokutendera kuti uunze kana kuisa iwo mafaera maviri (ini handina kushandisa Xfce kwenguva yakareba uye ini handirangarire).
Kana iwe usingakwanise, saka unofanirwa "kuvhura". Iwo maforodha maviri akaburitswa (Booerang naBoomerangDeux) anoendeswa ku ".themes" dhairekitori mune yako dhairekitori remushandisi.
Ipapo iwe unongofanirwa kusarudza iyo tema kubva kune theme kana hwindo maneja.
Mumazuva mashanu Unico anogona kuenda pasi kunoongororwa 😀
Mafonti akanakisa ekushandisa mune iyo terminal